नेपाली नेतृत्वको वस्तुगत चुनौती – Chitwan Post
नेपाली नेतृत्वको वस्तुगत चुनौती
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, अशोज ३, २०७६
कर्ता सात्विक उच्यते ।।
—श्रीमद्भागवतगीता, श्लो.२६, अध्याय १८ ।
उल्लिखित महान् कथन श्रीकृष्णद्वारा व्यक्त अभिलक्षणात्मक वाणी हुन् । यसमा सा¤िवक व्यक्तिमा हुने गुणबारे चर्चा गरिएको छ । श्रीकृष्णका अनुसार समस्त सांसारिक रागहरुबाट मुक्त, अहंकाररहित, सत्सङ्कल्पका साथ उत्साही भएर सफलता प्राप्त गर्दा पनि र नगर्दा पनि दुवै अवस्थामा विचलित नभई कार्य गर्ने व्यक्ति नै सा¤िवक कहलाउँछ । उक्त अभिलक्षण हेर्ने हो भने यसमा हाम्रो नेपाली राजनीतिक समाज कत्तिको खरो उत्रिन सक्ला विचारणीय छ ।
हो, नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरुमा यी गुणहरु पाउनु अहिले साँच्चै दुर्लभ भएको छ । हुन त, हिजो देश र जनताका निम्ति जेलनेल खपे । जेल तोडेर फरार हुँदा तत्कालीन शासकले सुइँको मात्र पाएको भए पनि ऐया भन्नै नपाई कालको एकै गाँस हुनुपथ्र्यो । सशस्त्र युद्धमा हुँदा टाउकाको मोल तोकेर खोज्ने र भेटिए इन्काउन्टर वा हिरासतमै ज्यान मासिनेसम्मको जोखिम थियो । त्यसलाई समेत पर्वाह नगरी सारा घरबार छोडेर भूमिगत जीवन जिउनु नेतृत्वका शायद सा¤िवक अभिलक्षण थिए । त्यसमा पनि सादगीपूर्ण जीवन जिउने हिजोको त्यो दृढता, त्याग र बलिदान देख्दा जसकसैले पनि उच्च सम्मान गर्छ । दुःखीकहाँ पुगे दुःख नै बाँडे । दुःख मोचनको एकमात्र उपाय भनेको सामन्ती राज्यव्यवस्थाको अन्त्य र गरिबको हितअनुकूलको राज्यव्यवस्थाको स्थापना भएको भन्दै उनैकहाँ बसे । आँटो–ढिँडो, मकै–भटमास जे जुट्यो त्यसैमा चित्त बुझाए । किसानकहाँ गए, त्यहाँ पनि किसानसँगै खेतखलियानमा पुगे । उनीहरुलाई काममा सघाए । उनीहरुको मनोबल बढाए । मन जिते र त्यहीँ सुखदुःखका साथी भए, त्यहीँ बसे । मजदुरकहाँ पुगे, उनीहरुसँगै मजदुरी गरे र उनीहरुको पनि मनोबल उच्च तुल्याउने कार्य गरे र साँच्चै नै नेतृत्व भनेको दुःखमोचक नै हुन् भन्ने अनुभूति गराए । कतिपय स्थानमा त नेता भनेका हाम्रा मसिहा नै हुन् भन्ने छाप बसाउन सफल भए, खासगरी क्षेत्रीयताको नारा घन्काएका जनताका निम्ति ।
चाहे राणातन्त्र समाप्तिका निम्ति होस्, चाहे पञ्चायतकालीन शासनव्यवस्था अन्त्यका लागि होस् वा प्रत्यक्ष राजतन्त्र अन्त्यका समयावधिमा भूमिगत जीवन यापन गर्ने सिलसिलामा गरिएका व्यवहारहरु स¤वगुणयुक्त लाग्छन् । खाने, बस्ने, सुत्ने, बोल्ने र व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरु अहंकाररहित, सफलता र असफलता हात परे पनि निराश नभई काम गर्ने नेताका रुपमा स्थापित रहे । यही सा¤िवक गुण भएकै कारण सारा जनताले यिनका बोलीलाई विश्वास गरे । तत्कालीन शासक र शासनव्यवस्थाका विरूद्ध चालिएका हरेक कदममा साथ दिए । बुट खाए । लठ्ठी र मुंग्री खाए । संगीनद्वारा रगतपच्छे पारिए । गोली खाए र शहादत प्राप्त गरे अनि शासनव्यवस्था परिवर्तन गरे ।
जब शासनसत्ताको बाग्डोर सम्हाल्न पुगे तब उनीहरुमा विद्यमान सा¤िवक गुण बिस्तारै श्रीकृष्णले भनेझैँ राजस गुणमा परिवर्तन हुनथाल्यो । गीताको अध्याय १८ को सत्ताइसौँ श्लोकमा रजोगुणबाट प्रभावित मानिसको सुन्दर अभिलक्षण पाइन्छ । यसमा विषयवस्तुहरुमा अनुराग राख्ने, आपूmले गरेका कामको लाभ खोज्ने, हिंसात्मक कर्म गर्न पनि पछि नहट्ने, हर्ष र शोकबाट प्रभावित हुनेहरु राजसी गुणयुक्त व्यक्ति हुन् । गीताको अठारौँ अध्यायकै अठ्ठाइसौँ श्लोकमा चाहिँ शास्त्रको वचन नमान्ने, भौतिकवादी, स्तब्ध, हठी, शठ, कपटी, अर्काको अपमान गर्न निपूर्ण, अल्छी, विषादी चिन्तित अल्छे, तत्काल गरे हुने काम पनि थाती राख्ने व्यक्तिलाई तामसी भनिएको छ ।
हिजोको हाम्रो त्यो स¤वगुणी जनपक्षीय ठानिएका राजनीतिक नेतृत्व आज राजसी गुण धारण गर्दै वर्तमानसम्म आइपुग्दा उनीहरु तमोगुणीय विशेषताबाट अभिभूत हुन थालेका छन् । हिजोको नेतृत्वले आपूm र आप्mनो परिवारजनलाई भन्दा समाजका निम्ति मह¤वपूर्ण योगदान दिए । आप्mनो स्वार्थ भनेकै देशको स्वार्थ हो भन्ने सम्झे । फलतः आप्mनो स्वार्थ नै नेतृत्वको स्वार्थ बन्न गयो र देशले उन्नतिका केही सिँढी उक्ल्यो ।
खासगरी, कृष्णप्रसाद भट्टराईको सोच, गतिविधि र निर्णयहरुमा त्यस्तो सा¤िवक अभिलक्षण थिए । त्यस्तै, मनमोहन अधिकारीका सोच, गतिविधि र कार्यहरुमा सामञ्जस्य फेला पर्दछन् । त्यस्तै, अभिलक्षण पहिले बीपी कोइरालामा रहेको पाइन्छ । मदन भण्डारी, गणेशमान श्रेष्ठ र सुशील कोइरालाका सोच, चिन्तन र गतिविधिमा सा¤िवक गुणका अभिलक्षण भएको लाग्छ ।
यद्यपि, यस्ता सा¤िवक गुण भएका नेतृत्वमा समेत आंशिकरुपमा तमोगुण अभिभूत हुन पुगेको पाउँछौँ । कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, टनकपुर सम्झौता, कालापानी सहमति आदि इत्यादि राष्ट्रि«य स्वार्थभन्दा विदेशीहितअनुकूल भएका र गरिएका थिए । तिनले स्वदेशलाई सम्पोषित गर्नुभन्दा विदेशीलाई नै पोसेको थियो र छ । त्यसै सहमति र सम्झौताकै कारण आधा शताब्दीदेखि मुलुक ती नदीहरु र भू–उपयोग गर्नबाट वञ्चित रहँदै आएको छ । यस कार्यलाई कसरी सा¤िवक गुण भनिहाल्ने ? हुन सक्छ उनीहरुमा पनि बाध्यात्मक स्थिति सृजना गरिएको थियो । यसैले पनि उनीहरु परिस्थितिको दास बनाइएका थिए र यस्तो कार्य गर्न बाध्य भए । तर, कुनै बाध्यात्मक स्थिति रहेको भए त्यसलाई जनसमक्ष व्यक्त गर्न नसक्नु उनीहरुको कमजोरी भन्नैपर्छ । जोगी हुन कसैले राजनीति गरेको होइन भन्ने, सुख ुविधा, ऐशआराम र शानका निम्ति राज्यशक्तिको उपयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई न स¤वगुणी भन्न सकिने स्थिति छ, न त राजसी नै भन्न सकिने स्थिति नै छ । दुवैबाट निकृष्टतातिर उन्मुख आजको समग्र नेतृत्व तामसी गुणतिर अभिभूत हुँदै गएको छ । सानो लेखमा सबै नेताप्रतिको बुझाइ लेख्न असम्भव रहे पनि प्रतिनिधिमूलकरुपमा भने भन्नु निष्कर्ष दिने सवालमा सान्दर्भिक हुन्छ ।
हाम्रो जनमानस पूर्वाग्रही र दलीय चश्मा पहिरिन्छ र त्यसैअनुरुप व्यवहार पनि गर्छ । छिनमै प्रशंसा र छिनमै तिखो आलोचना विशेषता बनेको स्थितिमा अलिक केही व्यवहारहरु पर्खेर हेर्ने धैर्यता छैन । योगेश भट्टराईलाई अलिक दिनअघि प्रशंसाको पुष्पवृष्टि र भर्खरै हलाहल विषवमन भयो । प्रत्यक्ष रंगमञ्चमा झैँ ताली र गाली दुवै कतिपय सन्दर्भमा सान्दर्भिक पनि लाग्लान्, कतिपय सन्दर्भमा तिनै औजार अनुपयुक्त ठहर्न पुग्छन् । हुन त, कतिपय नेतृत्व सा¤िवक अभिलक्षणयुक्त छन् । महान् सपना देख्ने, त्यसलाई पूरा गर्न तत्पर रहने, आप्mना कुरालाई कुनै न कुनै विधि र तरिकाबाट पूरा गर्न पहल गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा केही सा¤िवक अभिलक्षण देखिए पनि कतिपय ठाँट, रोश, रवाफ देखाउने शैली राजसी प्रकृतिका छन् । अरुलाई निकृष्ट भाषा र शैलीमा खसालेर भन्ने, अरुको अपमान गर्न अलिकति पनि संकोच नमान्ने, आपूmले चाहेपछि जसरी पनि प्राप्त गरेरै छाड्ने प्रवृत्ति तामस गुणयुक्त लाग्छन् । प्रचण्डमा सा¤िवक अभिलक्षणभन्दा अधिकतर राजसी र तामस गुणकै प्राचुर्य भएको लाग्छ । त्यस्तै, अभिलक्षण वामदेवभित्र पनि छ । माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालमा औसतमा उस्तै अभिलक्षण देखिन्छन् । धेरै राजस, मात्रात्मक हिसाबले तमो र सा¤िवक गुण उस्तै उस्तै आकारमा छन् र सुवासचन्द्र नेम्बाङमा ज्यादा सा¤िवक र आंशिक राजस गुण रहेको लाग्छ । भीम रावलमा सा¤िवक र राजस झन्डै झन्डै उस्तै लाग्छन् । नारायणकाजीमा सा¤िवक र राजस बराबरीजस्तो, बादलमा सा¤िवक, राजस र तामस सराबरीजस्तो, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईमा सा¤िवकपन र राजस गुण बराबरीजस्तो रहेको लाग्छ ।
त्यस्तै, देउवामा बराबरी मात्रामा राजस र तामसको प्राबल्य भेटिन्छ । रामचन्द्र पौडेलमा सा¤िवक अभिलक्षण रहे पनि राजसका अभिलक्षण पनि छन् । कृष्णप्रसाद सिटौला र विश्वप्रकाश शर्मामा सा¤िवकको मात्रा ज्यादा, डा. शशांक कोइरालामा सा¤िवक कम राजस ज्यादा, गच्छदारमा समानरुपमा राजस र तामस, गगन थापामा आंशिक सा¤िवक ज्यादा राजस, प्रदीप गिरीमा सा¤िवक र राजस, डा. बाबुराम भट्टराईमा आंशिकरुपमा सा¤िवक, केही राजस र केही तामस प्रवृत्तिको सम्मिश्रण, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोमा समानरुपमा राजस र तामस, महन्त ठाकुरमा उत्तिकै मात्रामा तीन गुण, कमल थापामा राजस र तामसको मिश्रण रहेको लाग्छ । समग्रमा वर्तमान नेपाली राजनीतिक वृत्त आजको प्रवृत्ति र मनोवृत्तिहरु नियाल्दा सा¤िवकभन्दा राजस र तामसका अभिलक्षणहरुबाट ज्यादा प्रभावित भएझैँ लाग्छन् । यसर्थ पनि नेपाली राजनीति क्रमशः सा¤िवकबाट राजस हुँदै तामसोन्मुख भइरहेको लाग्छ । केही नयाँ दलका नयाँ अनुहारहरु पदको कसी लागेपछिमात्रै खुटिने हुन् । त्यहाँ नपुग्दासम्म नेगेटिभ धारणा बोकेको जनमानसलाई एकछिनका निम्ति जुरूक्क जुरूक्क उचाल्न सके पनि त्यसले खासै अर्थ राख्दैन भन्ने स्वयंसिद्ध छ । बाल तथा असल युवापुस्ता राजनीतिलाई घृणा गर्छ र यतातिर आउन उदासीन देखिन्छ । यसर्थ, अबको नेतृत्वको चुनौती भनेको नेतृत्वमा च्याउझैँ उम्रिएकोे तामस गुणलाई पुनः सा¤िवक गुणतर्फै फर्काउनु हो र अबको नारा भनेको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’भन्दा पनि ‘सा¤िवक नेतृत्व र सादगी जीवनपद्धति’ भन्ने हुनुपर्छ । यसो भयो भने बल्ल नेतृत्वको सा¤िवक गुणको भाइब्रेसन तल्लो तह (ग्रासरूट) सम्म पर्छ । र, समाजमा सा¤िवक गुणबाट समाज सकारात्मक मार्गतिर उन्मुख भई मुलुक समृद्धितिर स्वतः अभिलक्षित हुनेछ । नारा, प्रभातफेरी र भाषण जरूरत पर्दैन ।
संविधानप्रतिको सर्वस्वीकार्यता जरूरी